Fifandraisana mahafinaritra manampy amin'ny fitarihana ny tsindrona | Valin'ny Fanamarinana
Home fahasalamana adin-tsaina
Raha te hijery haingana ny adin-tsaina ianao dia jereo ity Video.
Ny fihenjanana mahery vaika dia fampitandremana voajanahary voajanahary amin'ny vatana izay manampy antsika hamaly ny fandrahonana fohy na fanovana eo amin'ny tontolo iainantsika. Izany dia singa mahavelona tafahoatra. Amin'ny maha-valiny ara-batana azy, dia manosika ny herintsika hisakanana ny fihetsika, toy ny sidina na ny ady. Azo alaina ho valim-bolo efatra izy io: fisalasalana (fitsangatsanganana), ny fiaramanidina (manalavitra ny voka-dratsin'ny fahatsapana dia matetika ny valinteny alefa amin'ny ady); miady (manoloana ny loza) ary mangatsiaka (milalao ny maty ary manantena ny mihetsika ny bera / fandrahonana). Ireo dingana ireo dia azo ampiharina amin'ny fitaintainana isan'andro koa.
Rehefa salama isika dia manana hery hiatrehana fotoana fohy na adin-tsaina mafy, ohatra, mihazakazaka mitondra bisy. Mihena ny fon-tsika, miova ny haavon'ny siramamy ao anatintsika, mihamitombo ny fiontanantsika mba hanamaivana ny vatana rehefa mihazakazaka isika. Ireo fanehoan-kevitra rehetra ireo dia vokatry ny hormones ao amin'ny fihenjanana, adrenaline ary cortisol. Rehefa miteny voalohany isika, dia lazao, amin'ny fahitana ny fiara fitaterana alohan'ny hahatongavantsika any amin'ny bisy, dia mamokatra adrenalinina sy noradrenaline isika (ny teny amerikana dia epinephrine sy norepinephrine) mandritra ny minitra vitsy mba hanampiana antsika hanangona azy any aoriana. Rehefa tapitra ny adin-tsaina (amboadia! Nataonay) dia tafaverina haingana ny vatanay, ny balam-panafody dia natsangana.
Raha mitohy ny tebiteby, ohatra, tsy malahelo ny fiara fitateram-bahoaka isika ary mety atahorana ny ho tara amin'ny fivoriana na daty manan-danja, dia ny kortisol ny neurochemical dia miakatra mba hihazona ny haavon'ny angovo ho an'ny fotoana lava mba hiatrehana ny adin-tsaina mitohy. Ny Cortisol dia manangona angovo avy amin'ny tahiry voatahiry ao amin'ny atiny sy ny hozany mba hanampy antsika 'hiady' na 'handositra'. Ny olana dia afaka manohy mikaroka ao anatin'ny rafitra tsara izy rehefa tapitra ny tsindry.
Manohy manondraka ny rafitra misy antsika ny Cortisol raha manana olana maro isika eo amin'ny fiainantsika. Ankehitriny, ny tebiteby dia manjary saina ara-tsaina, manahy momba ny toerana misy azy, ny fianakaviana, ny fahombiazana ara-toekarena na ny fahatsapana ho irery, fa tsy loza mitatao ara-batana toy ny tolona foko na tigra sabatra. Ny vatantsika dia mamaly ireo loza ara-psikolojika tahaka ny nataon'ireo raiamandin'ny razantsika fahiny tamin'ireo loza ara-batana.
Satria ny olona dia lasa ampiasain'ny / sary vetaveta amin'ny sary vetaveta sasany amin'ny tranonkala mamoafady, mila sary marobe kokoa izy ireo ary manjavozavo kokoa ny sary avo lenta. Ny tebiteby dia mampitombo ny firaisana ara-nofo izay miteraka fiakaran'ny dopamine. Ny habetsaky ny cortisol ao amin'ny rafitra dia marika biolojika ho an'ny tebiteby, fa koa ny fahaketrahana.
Ny fiatrehana dia afaka manangona eo ambany fanentanana. Tampoka teo dia afaka mahatsapa ho sahirana amin'ny fiainana isika ary mahatsapa fa tsy afaka miatrika. Tsy manam-paharetana amin'ny fifanoherana na olana isika. Ny atidoha miresaka dia miankina amin'ny fahazarana. Sarotra loatra ny fomba fisainana. Be loatra ny adin-tsaina, rehefa ela loatra, dia lasa adin-tsaina. Izany dia rehefa tsy afaka mamerina amin'ny laoniny intsony ny vatantsika amin'ny fiatrehana haingana. Izany no mampivadika antsika, mampandefitra ny rafitra ara-piainana, mahatonga antsika ho mora voatery ho lozam-pifamoivoizana ary mamela antsika ho ketraka sy ahiahy ary tsy mifehy. Amin'izay fotoana izay dia mora kokoa amintsika ny maka hafa fanafody, zava-mahadomelina na toaka, ary koa fanentanana amin'ny aterineto bebe kokoa mba hahatonga antsika ho salama kokoa sy hisorohana ny fanaintainana.
Ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet matetika dia mametraka fihenjanana lehibe amin'ny herin'ny vatana voatahiry ary mitarika amin'ny karazana olana ara-batana sy ara-tsaina. HPA tsy manara-dalàna amin'ny lehilahy amin'ny aretim-pivalanana (2015) - Fianarana miaraka amin'ireo mpidoroka lahy 67 lahy sy fanaraha-maso mifanentana amin'ny taonany 39. Ny axis Hypothalamus-Pituitary-Adrenal (HPA) no mpilalao afovoany amin'ny valin'ny fihenjananay. fahazaran-dratsy manova ny fiarovan-tenan'ny atidoha mitarika mankany amin'ny HPA tsy mety. Ity fianarana momba ny fiankinan-dohan'ny fanaovana firaisana ara-nofo (hypersexuals) io dia nahitana valim-pifamoivoizana niova izay manintona ny zava-misy amin'ny fiankinan-doha.
Ny fomba hitantànantsika ny adin-tsaina mandritra ny taona dia ny fanalahidin'ny fahasambarantsika sy ny fifandraisantsika. Tahaka ny hitantsika avy amin'ny Fianarana mafy, ny fiankinan-doha, ny fahaketrahana sy ny neurotis dia ny sakana lehibe indrindra amin'ny fifandraisana salama sy sambatra.
Ny fiasan'ny saina dia manosika ny saina hifantoka amin'ny saina sy ny angovo avy amin'ny sehatra fototra toy ny atidoha, ny rafi-pandaminana sy ny taovam-pananahana, mba hanomezana angovo ho an'ireo faritra mila angovo avy hatrany mba hahatonga antsika hiala amin'ny loza mety hitranga. Izany no mahatonga ny fotoana, raha tsy mitantana tsara ny adin-tsainay izahay, ary tsy azo ihodivirana ny adin-tsainay, dia mitombo ny fepetra nateraky ny fitsaboana toy ny aretina entina amin'ny tsinay, na ny fahatsiarovana mahantra ary ny tsy fahafahana mifantoka ela. Mampihena ny rafitra fiarovan-tenantsika isika, mora kokoa ny aretina ary ela kokoa mba hanasitranana. Ny taonany sy ny vatany dia miaritra ny taonany.
Ny adrenaline dia miteraka ratra ao anaty fantson-tsika izay mety mahatonga aretim-po na fikorotanana, arakaraka ny fahasarotan'ny aretina, ary manimba ny selan'ny hippocampus ny kortisol, manimba ny fahaizantsika mianatra sy mahatsiaro.
Indraindray, ny karazam-pientanentana ratsy indrindra dia ny fahatsapana fa tsy manana hifehezana ny olana isika, fa tsy afa-manoatra.
Raha fehezina dia mitarika antsika ny tebiteby.
<< Vokany ara-batana Famporisihana mahery vaika >>